Oovimba be-DOT-Funda ukurhweba
Polkadot Hovers ngaphezu $22 Inkxaso, May Resume Upside Momentum
Ixabiso lePolkadot (DOT) ikwintshukumo esezantsi kodwa inokuphinda iqalise ukunyusa phezulu. I-altcoin inqabile ukuya kwi-$ 22 ephantsi. Ukususela nge-17 kaJanuwari, i-cryptocurrency iye yahla emva kokukhatywa kwe-$ 28 yokuxhathisa. Namhlanje, ixabiso le-DOT libuyisela inkxaso yangoku kwi-22 yeedola. Inkxaso ye-22 ye-$ yi-low yangaphambili ye-10 kaJanuwari, ukuwa kwexabiso. Ukuba iibhere zisilela ukuphula i-$ 22 ephantsi, kucingelwa ukuba i-downtrend iphelile. Ukunyuka okuphezulu kuya kuphinda kuqalise ukuba inkxaso ibamba i-$ 22. Ngaphandle koko, iPolkadot ifikelele kwindawo ethengiswe kakhulu kwimarike. Uxinzelelo lokuthengisa lunokufikelela ekuphelelweni kwe-bearish.
Ixabiso le-altcoin likwinqanaba le-36 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ixabiso le-DOT lisondela kummandla ogqithisiweyo wemarike. Imivalo yexabiso ye-crypto ingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezenza ukuba kube lula ukuwa. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibheke emazantsi zibonisa ukuhla.
I-Polkadot iphinde yaqala phantsi i-downtrend njengoko ikhefu lexabiso lingaphantsi kwenkxaso yangoku. Okwangoku, ngoJanuwari 19 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 22.40.
I-Polkadot ingaphantsi kwe-20% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ifikelele kwindawo ethengisiweyo. Abathengi kulindeleke ukuba bavele kummandla othengisiweyo ukunyusela amaxabiso phezulu. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla. I-altcoin ine-bearish crossover. Oko kukuthi, i-SMA yeentsuku ze-21 iwela ngaphantsi kwe-50-day SMA ebonisa umyalelo wokuthengisa.
Namhlanje, i-DOT/USD inqabile ukuya kuthi ga kwi-22 yeedola ephantsi kodwa inokuphinda iqalise ukunyusa. Kubonakala ngathi imakethi iwile kwindawo ethengisiweyo. Isixhobo seFibonacci sibonise ukuba i-altcoin inokwenzeka ukuguqula kwinqanaba le-22 yeedola.